Aluminum Waterproof Blind Rivets Manufacturers and Suppliers - Factory China - Cixi Wenap International Trading Co., Ltd
Home > Products > Fiarovan-tena sy fanakam-basy > Fananganana fananganana fanorenana > Aluminum Waterproof Blind Rivets
Product Introduction of the Aluminum Waterproof Blind Rivets
Ny jiro rivotra, iray amin'ireo karazana jiro marobe, dia natao hamahana ny fampiharana izay tsy ahafahan'ny mpampiasa mahazo miditra amin'ny andaniny roa. Antsoina hoe bandy pop na blind pop sy ny bala amin'ny jamba ihany koa izy ireo, manana tendrony iray antsoina hoe rojo izay tapaka mandritra ny fametrahana azy amin'ny fitaovana fananganana fitaovana manokana. Ny endriky ny lohan-drakitra dia ny vondron'olona sy ny kôpity Ny rivotra alim-borona dia azo ampiasaina amin'ny fampiasana fitaovana tsy ara-magea sy tsy misy vanja. Ny rivotra tsy misy vy dia tsara indrindra raha ilaina ny tanjaka avo sy ny fiarovana. Mety ho kely ihany anefa izy ireny. Ny rivotra misy jiro ihany koa dia misy amin'ny alim-pitaratra sy milina vy, izay mety hahafeno fepetra miaramila manokana ho an'ny fampisehoana. Rehefa mifidy jiro jiro dia diniho ny elanelam-bidy, ny rivotra, ny diam-bidy, ny diam-bidy ary ny haavony, ary ny mari-pamantarana. Ny jiron'ny rivotra dia hanondro koa ny haben'ny lavaka izay mifanaraka amin'ny, ary ny habeny.
Product Parameter amin'ny Aluminium Waterproof Jiro Rivotra
Ã¸ 2.4 - ¸ 6,4, 3/32 "~ 1/4"
Karazana sokajy, karazana nofehezina, karazan-tsavoka lehibe, karazam-batana marobe, karazana voanjo ary toy izany.
Aluminium-steel, aluminium-aluminium, tsy misy vy-tsy misy vy, tsy misy vy - Sanda, Steel-Steel.
Mena, fotsy, manga, volafotsy, shite, mainty, bronze, beige, oak, mahogany ary ny sisa.
Zinc plated, mainty, varahina plated, vice plated ...
Kitapo plastika, boaty sy carton, avy eo apetaho amin'ny pallets, na amin'ny fangatahan'ireo cusomer.
Ny ekipa injeniera manana traikefa dia afaka mamolavola ny vokatra sy ny famokarana mifanaraka amin'ny santionany, sary na hevitra
Ny endriky ny fitaovana sy ny fampiharana ny rindrina Alvina mitafo-jiro
farany:Zinc plated, polished, plain, loko hosodoko
Material:Karbon-bolafotsy, alimo, vy tsy misy tanany.
fampiharana:Motor caoch, tranga Computer, Furniture, fitaovana elektronika, fanorenana
Tombom-panazavana momba ny Aluminium Waterproof Blind Rivets
Packaging Details:Kitapo plastika, boaty ary carton, avy eo mametraka eo amin'ny pallets, na amin'ny fangatahan'ireo mpanjifa.
Hot Tags: Aluminium Waterproof Blind Rivets, China, Manufacturer, Supplier, Factory, Made In China, Wholesale, Buy, Customized, On Stock, Bulk, Price, Price list, Quotation, High Quality
Aluminum Waterproof BlindAluminium Luminaire Aluminium Tite Trifold Rivotra Mangatsiaka JiroAluminum Lantern Bulb Tite